Rehefa tsy fotaka dia vovoka no ao Antsirabe - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Faritra malaza amin’ny hatsiaka i Vakinankaratra. Vitsy monja raha ny ao Antsirabe ny fotoana ahitana izany masoandro migaina izany. Ny orana sy ny fanala no fiainana mahazatra ny mponina. Tafiditra tanteraka ankehitriny ny vanim-potoanan’ny ririnina. Miovaova manaraka izay ihany koa ny maripàna amin’ny maraina sy antoandro. Misy fiantraikany amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina ao an-toerana io fiampitàna amin’ny vanin-taona tahaka izao io. Hifandrombahana manko ny akanjo mafana, ny kiraro sy ny fonon-tanana ary ny fonon-tenda ao an-tsena Sabotsy rehefa mangatsiaka ny andro, na dia midangana aok’izany aza ny vidin’izany. Ohatra, ny blouson lehibe dia tombanan’ireo mpivaro-damba efatra alina ariary. Ilaina tokoa ny miakanjo mafana amin’izao, indrindra ho an’ny zaza madinika, ary koa ireo mpianatra hanala fanadinana, izay tena mila izany. Ny vovoka rahateo mitorajofo raha vao mitsoka kely ny rivotra ka mahatonga aretina maro isankarazany, toy ny gripa mahery sy ny kohaka. Tokony hitandrim-pahasalamana hatrany ny tsirairay, ka na ny sakafo aza dia fadiana ny manao an-tsirambina ho an’ny mpivarotra manokana. Mba ho ara-pahasalamana tokoa ny sakafo amidy, raha ny fanazavana nantitranterin’i Rakotonarivo Jean Michel, mpitsabo ao amin’ny tobim-pahasalamana Andranomadio, dia atao anaty fitaratra na vitrine mba tsy ho azon’ny vovoka sy ny loto. Hafatra atsipy ho an’ireo mpanao hotely manamorona ireny arabe ireny hoy izy, satria mbola maro amin’ireo olona ireo no manao kitoatoa. Araka izany, na ny mpanao kibo an-tsena aza tokony ho mailo mandrakariva fa tsy ho finaritrin’ny voky eo fotsiny. Aleo misoroka toy izay mpitsabo, hoy ny fomba fiteny mahazatra, fa tsy antony bitika kely no handehanana hidirana hopitaly ka handaniana vola aman-karena.
Ny vanim-potoana mangatsiaka dia mitamberina ao antsaina ny fisian’ny Ranomafana. Ity Ranomafana ity no toerana isan’ny mahasarika sy manintona ireo mpizahatany ho ao Antsirabe. Tsy fandroana irery ihany anefa hoy ny tomponandraikitra no atao ao, fa sady misy fitsaboana sy otra amin’ny rano mafana voajanahary ihany koa. Betsaka ny vahiny na avy any ivelany na avy eto amin’ny Nosy no tonga milona ao. Diman-jato sy arivo ariary ny sarany hidirana ao. Raha toa ka hiotra kosa dia valo alina no aloa ary fitsaboana atao mandritra ny roam-polo andro izany. Misy dobo natao ho an’ny ankizy ao an-toerana ary misy ihany koa ny an’ny lehibe. Hipoka olona mandro ny Ranomafana rehefa maraina. Voajanahary ity rano mafana an’Antsirabe ity, kalikera ny fanambaniny ary voalazan’ireto olona mpilona matetika ao fa manala havizanana sy aretin-kozatra ny filomanosana amin’io rano io. Tsy dia mamay fa matimaty ihany ity rano ity ka tsy hatahorana hanimba ny hoditra. Ary mba hisorohana ny fahalotoan’ny dobo hoy ny mpiambina mpanaramaso ao, dia efa nasiana efitra maromaro fidiovana sy fivalanan-drano mialoha. Miantoka ny fahasalamana daholo izany rehetra izany, ary manana tombony manokana Antsirabe amin’izao ririnina izao noho ireo toerana voajanahary misy rano mafana. Raha amin’ny mpizahan-tany manko dia antsoina hoe centre thermal ity renivohitr’i Vakinankaratra ity, ary izay no nametrahana ny anarana hoe tanànan’ny rano azy. Na dia mitorajofo aza ny vovoka, dia aoka hahalala madio lalandava; tsy midika hoe mamirifiry ny andro dia tsy handray rano.